” ကာမအရသာ “ – Grab Love Story
“ ရာဇာရေ….ဟေ့ ရာဇာ….”
ခြံတံခါးဝအနားတွင် ရပ်သွားသော ကားအတွင်းမှ အသံတစ်သံက တိတ်ဆိတ် စပြုနေသော ညတွင် ခပ်အုပ်အုပ်ကလေး ထွက်ပေါ်လာသည်..။
“ ဘယ်သူလဲ..ဟေ့ ခြံအပြင်က …”
ခြံတွင်းရှိ တိုက်ခံအိမ်လေးအတွင်းမှ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အတူ အသက် နှစ်ဆယ့်နှစ် နှစ်ခန့်ရှိသော လူငယ်တစ်ယောက်လဲ ပါလာလေသည်..။
ကားအတွင်းမှ လူများကို ရာဇာမြင်လိုက်ရလျင် ပိတ်ထားသော ခြံတံခါးအား ဖွင့်ပေးလိုက်သည်..။ ခြံတံခါးပွင့်သွားလျင် ကားမောင်း ဝင်လာသည်..။ ကား ခြံထဲရောက်လျှင် ရာဇာက ခြံတံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည်..။ ပြီးနောက် ကားနားသို့ ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်..။
“ ဟေ့လူ…ကိုထွဋ်…သူက ဘယ်သူလဲ ဗျ…”
ကိုထွဋ်ဆိုသူနှင့် အတူ ကားရှေ့ခန်းမှ ဆင်းလာသော အသက် သုံးဆယ်ခန့်ရှိ လုံးကြီးပေါက်လှနှင့် ပြင်ဆင်ခြယ်သထားသော မိန်းမတစ်ယောက်အား ရာဇာ မြင်လိုက်ရသဖြင့် မေးလိုက်သည်..။
“ ကိုထွဋ် … အထဲ ခေါ်သွားဗျာ..ကျနော် ရာဇာကို ပြောပြလိုက်မယ်.. တော်ကြာ ဘေးလူတွေ မြင်ရင် မကောင်းဘူး…မြန်မြန်သွား…”
ကားနောက်မှ ဆင်းလာသူက ပြောလိုက်သဖြင့် ကိုထွဋ်ဆိုသူက အမျိုးသမီးအား ရာဇာနေသော အိမ်ထဲသို့ ခေါ်သွားလေသည်..။
“ နေစမ်းပါအုံး…အောင်အောင်ရ..မင်းတို့လုပ်လာတာတွေက ဘာလဲကွ…ငါတော့ ဘာမှ နားမလည်ဘူး…”
“ ဒီလို..ရာဇာရ ..တို့အခု အကြံအဖန် ခေါ်လာတာ..တစ်ညလုံး သုံးရာပေးရတယ်..၊ အဲဒါ မင်းလည်း ကြုံဖူးအောင် မင်းဆီ ခေါ်လာရတာ…”
အောင်အောင်ဆိုသူက ရာဇာ့အား ရှင်းပြလိုက်သည်..။
“ ဟာကွာ…မင်းတို့ကလဲ…ဘေးလူတွေ သိကုန်ရင် မကောင်းဘူး…..”
“ မသိပါဘူး..ကွ…. မင်းတို့အိမ်နဲ့ တစ်ခြားအိမ်တွေက ဝေတာပဲ ဥစ္စာ.. လာပါကွာ…မင်းလဲ ကြုံဖူးတယ်ရှိအောင် ငါတို့ ခေါ်လာခဲ့တာ….လာ အထဲကို သွားကြရအောင်….”
ရာဇာနှင့် အောင်အောင်တို့ အိမ်ထဲ ရောက်လျင် ဧည့်ခန်းရှိ ဆိုဖာပေါ်တွင် ကိုထွဋ်နှင့်အမျိုးသမီး တို့ ထိုင်နေကြသည်.။
“ လာဟေ့..ရာဇာ..မင်းမှာ ရေခဲ ရှိတယ် မဟုတ်လား..တို့ကို ဖန်ခွက်နဲ့ ရေခဲ ပေးအုံး..”
ကိုထွဋ်က လက်ဆွဲအိတ်အတွင်းမှ အရက်ပုလင်း နှင့် မြည်းစရာအဖြစ် ဝယ်လာသောစားစရာများကို ထုတ်ကာ ပြင်ဆင်နေလေသည်..။ ရာဇာတစ်ယောက် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးကို လှမ်းကြည့်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲရှိ ရေခဲသေတ္တာမှ ရေခဲနှင့် ဖန်ခွက်များကို ထုတ်ယူလာခဲ့သည်..။
ရာဇာတစ်ယောက် အပြင်ပြန်အရောက်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် အောင်အောင်တို့ မရှိကြ..။ ဘယ်များ ရောက်သွားကြသလဲဟု လိုက်ကြည့်မိစဉ် သူ့အိမ်ခန်းထဲမှ အောင်အောင် ထွက်လာသည်ကို ရာဇာ တွေ့လိုက်ရသည်..။
“ ဟေ့ကောင် အောင်အောင် ….အမျိုသမီးရော..”
“ မင်း ကုတင်မှာလေကွာ…ကဲ မင်းသွား..မင်းက လူသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ မင်းနေရာဆိုတော့ ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ မင်း အရင်ဝင်ကွာ…..သွား..”
အောင်အောင်က ရာဇာ့လက်ကို ဆွဲကာ အခန်းတွင်းသို့ တွန်းလွှတ်နေလေသည်..။ ကိုထွဋ်ကတော့ ရာဇာချပေးထားသော ဖန်ခွက်တွင်းသို့ ရေခဲတုံးကလေးများ ကို ထည့်ရင်း အမြည်းနှင့် တွဲသောက်ရန် ပြင်ဆင်နေလေသည်..။
“ ဟာ..ကွာ…….ငါ မဝင်ရဲဘူး…”
ရာဇာက အောင်အောင့် လက်အတွင်းမှ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် နှင့် ဖြစ်နေလေသည်..။
“ ဟေ့ကောင်..အချိန်ဖြုံးမနေနဲ့ အချိန်ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်..ဘာမှ ကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ ကွ….ဘာရှက်စရာ ရှိလဲ…သွားစမ်းပါကွာ…”
အောင်အောင်က အတင်းတွန်းလွှတ်နေသဖြင့် မရဲတရဲနှင့် သူ့အခန်းအတွင်းသို့ ရာဇာ ဝင်လာခဲ့သည်..။ ခြံဝရှိ ဆေးခန်းလေးမှာ သူ့မိဘများ၏ မိတ်ဆွေ တစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဇင်မာလွင်၏ ဆေးခန်း ဖြစ်လေသည်..။ ယခု ဆေးခန်းပိတ်ကာ ဒေါက်တာ ဇင်မာလွင်တို့ ပြန်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်..။
အခန်းတွင်းရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးမှာ ရာဇာ ဝင်လာသည်ကို တွေ့ရလျင် ထိုင်နေရာမှ အသာရွှေ့ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန် လှဲအိပ်လိုက်သည်..။ အမျိုးသမီး၏ ပြည့်ဖြိုးကြီးမားလှသော ကိုယ်လုံးက ရာဇာ့အိပ်ယာပေါ်တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးနှင့် ဖြစ်နေသည်.
အမျိုးသမီးအား ငေးစိုက်ကြည့်နေရာမှ ကုတင်ရှိရာသို့ ရာဇာတိုးသွားခဲ့သည်..။ တစ်ခါမျှ မကြုံခဲ့ဖူးသေးသဖြင့်လည်း ရာဇာ ရင်ထဲ ရင်ခုန်သံများ တဒိန်းဒိန်းနှင့် ဆူညံနေလေတော့သည်..။
ကုတင်နားရောက်လျင် တင်ပလွှဲ ထိုင်ချရာမှ အမျိုးသမီးနှင့် အတူ ယှဉ်ပြီး ကပ်လှဲအိပ်လိုက်စဉ် …ဘာလုပ်ရမည်ကိုတော့ သိနေသဖြင့် ခုန်နေသော ရင်ကို အသာထိန်းရင်း ရာဇာလုပ်တတ်သလို လုပ်လိုက်လေသည်..။ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးအား ရာဇာ ဆွဲဖက်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် ဖင်သားအိအိကြီးကို လက်နှင့် ဆုတ်ကိုင်ရင်း နှုတ်ခမ်းချင်း ဖိစုပ်ယူလိုက်သည်..။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော်လည်း နိုင်ငံခြား အပြာကားများ ကြည့်ဖူးထားသည်မို့ ထိုကဲ့သို့ ရာဇာ လုပ်နေမိသည်..။ အမျိုးသမီးကလည်း ရာဇာနှင့် အပြိုင် ပြန်လှန်နှုတ်ခမ်းစုပ်ပေးနေရာ လူပျိုရိုင်းလေး ရာဇာ တစ်ယောက် ရာဂစိတ်များ တက်ကြွလာရတော့သည်..။
နှုတ်ခမ်းချင်း အငမ်းမရ စုပ်ရင်းက ရာဇာ့လက်သည် အမျိုးသမီး ရင်ဘတ်ပေါ် ရောက်သည်..။ အင်္ကျီပေါ်မှ အုပ်ကာ နို့အုံအိအိကြီးများကို ဆုတ်ချေပေးနေလေသည်..။ ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်းနှင့် ပြင်းပြလာသော အသက်ရှူသံများက ရာဇာ့ ကုတင်ထက်တွင် ပေါ်ထွက်နေလေသည်..။
အင်္ကျီပေါ်မှ နို့အုံကို ဆုတ်ကိုင်ဆွဲချေရသည်ကို ရာဇာ အားမရတော့သဖြင့် အမျိုးသမီးအား …
“ ဒါတွေ ချွတ်ပေးပါလား ဗျာ…”
ဟု ပြောလိုက်သည်..။ အမျိုးသမီးက သူမ၏ အဝတ်အစားများ ချွတ်ပေးချိန်တွင် ရာဇာကလည်း သူ့အဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားကြသည်နှင့် ရာဇာ ပြန်စလေတော့သည်..။
ပထမဆုံး အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းပွေ့ဖက်ကာ အငမ်းမရ နမ်းပစ်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းကို အတင်းဖိကပ်စုတ်ယူလိုက်ရာ အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်လုံးကြီး ကြွတက်လာရလေသည်..။ နှုတ်ခမ်းချင်း ပြွတ်ခနဲ မြည်သွားသည်အထိ စုပ်ပြီး မို့မောက် ကြီးထွားလှသော နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို လက်နှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်ချေပေးနေရာမှ ပါးစပ်ဖြင့် ငုံစုပ်လိုက်သည်တွင်…
“ ကွယ်….မင်းကလည်း ဒီလောက်ကြီးဆိုတော့ မမ နာတယ် ကွာ…အသားတွေကွဲ့…မောင်လေးရဲ့…မင်းလုပ်ပုံနဲ့သာဆိုရင် မမတစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ ကြေကုန်တော့မယ်…ဖြေးဖြေးလုပ်မှပေါ့….”
ဟူသော အမျိုးသမီးထံမှ စကားများထွက်ပေါ်လာသည်..။ ရာဇာကတော့ သူ တစ်ခါမျှ မထိတွေ့ဖူးသည့် မိန်းမတစ်ဦးနှင့် အသားဆိုင် အသားခဲများကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ် ဆုတ်နယ်ခွင့် ရနေသည်မို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆုပ်နယ်ရင်း နို့တစ်လုံးကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စို့နေလေသည်.။
နို့အုံကို ကိုင်ထားသော လက်ကို အမျိုးသမီး၏ ပေါင်ကြားသို့ ထိုးလိုက်ကာ ဖောင်းကြွနေသော စောက်ဖုတ် မုန့်ပေါင်းကြီးကို အုပ်ကိုင်ထားလိုက်လေတော့သည်..။ ပူပူနွေးနွေးနှင့် လုံးလုံးကလေးဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနှင့် ထိဘူးသည်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်၍ ရာဇာ့ရင်ထဲ၌ ထူးခြားသော အရသာများ ခံစားလိုက်ရသည်..။
စောက်မွှေးလေးများက စောက်ဖုတ်ဘေးတစ်ဝိုက်တွင် ပေါက်နေကြသည်မို့ လက်ဝါးစောင်းတွင် ကြမ်းရှရှနှင့် ဖြစ်နေသည်..။ စောက်ဖုတ်အုံက ဖုဖောင်းနေသဖြင့် ကြမ်းရှရှ အမွှေးများနှင့် ရောကာ အသာပွတ်ပေးနေရင်း နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စို့ပေးနေရာမှ ရာဇာ့စိတ်များ ပိုမို သောင်းကျန်းလာလေတော့သည်..။
ထို့ကြောင့် ခဏလောက်သာ ဆွပေးပြီးသည်နှင့် အမျိုးသမီး ကိုယ်လုံးကြီးပေါ်သို့ တက်ဖိမှောက်ချလိုက်တော့သည်..။ အမျိုးသမီးကလည်း အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိထားသူမို့ ရာဇာ့ကိုယ်လုံး သူမကိုယ်ပေါ်ရောက်လာသည်နှင့် အလိုက်သင့် ပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်…။ ပေါင်တန်ဖြိုးဖြိုးကြီးနှစ်ချောင်းကိုလည်း ဖြဲကားပေးလိုက်သည်..။
သူမ၏ ကိုယ်ပေါ် ပိကျလာသော ရာဇာ့ကိုယ်လုံးကို အလိုက်သင့် ဖက်ပြီး ပေါင်တန်များ ကားပေးပြီးလျှင် ရာဇာ့လီးတန်ကြီးကို သူမ၏ လက်ဖဝါးလေးဖြင့် ဖမ်းဆီးဆုပ်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲကာ တေ့ပေးလိုက်သည်..။
အပေါ်မှ မှောက်ချပြီး နေရာယူလိုက်သော ရာဇာတစ်ယောက်လည်း အမျိုးသမီး ချိုင်းကြားမှ လက်လျှိုသွင်းကာ ပခုံးကို ဆွဲနေရင်းက အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် သူ့လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ကာ သူမ၏ စောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ပေးနေသည်ကို အလိုက်သင့် လိုက်လုပ်ပေးနေရာမှ စောက်ဖုတ်ဝသို့ လီးတန်ကြီး တေ့မိသလိုဖြစ်သွားသည်နှင့် ဖိထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်..။
အိခနဲ နှင့် ထောင်မတ်နေသော ရာဇာ့ လီးတန်ကြီးမှာ အမျိုးသမီး၏ ဖောင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ တဝက်လောက် တိုးဝင်သွားလေသည်..။
လီးဝင်သွားသည်နှင့် ရာဇာတစ်ယောက် ဆောင့်လိုးလေတော့သည်..။ လေးငါးဆယ်ချက် ဆောင့်လိုးပြီးချိန်တွင် အမျိုးသမီး၏ ဆီးခုံနှင့် သူ့ဆီးခုံတို့ ဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ မြည်သည်အထိ ကြီးမားရှည်လျားသော လီးတန်ကြီးက ဖောင်းကြွပြန့်ကားနေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးအတွင်းသို့ အဆုံးဝင်နေပြီဖြစ်သည်…။
လီးပေါင်းမြောက်များစွာကို အလိုးခံထားရသည့် အမျိုးသမီး၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ သိပ်မချောင်သေးပေ..။ ရာဇာ့လီးတန်ကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေသဖြင့် ခပ်ကြပ်ကြပ်နှင့် ဖြစ်နေလေသည်..။ လူပျိုကလေး ရာဇာမှာလည်း မိန်းမ မလိုးဖူးသေးပေမယ့် လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက မိန်းမများကို မှန်းကာ ဂွင်းတိုက်ပြီး လီးကို ဆွနေခဲ့သူဖြစ်လေရာ ယခုအချိန်တွင် သူ၏ လီးမှာ ပေမှီဒေါက်မှီ ဖြစ်နေလေပြီ..။ ယောက်ျားများထဲတွင် ရှားရှားပါးပါး အရှည် ၇ လက်မကျော်ကျော် ရှိပြီး လုံးပတ် ၆ လက်မနီးပါးမျှ တုတ်သော လီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်..။
လီးကြီးသည်ကို မိန်းမများ သိပ်မကြောက်ကြချေ..။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကလေးပင် မွေးနိုင်သော စောက်ဖုတ်က လုံးပတ်ကြီးသော လီးတန်များကို မမှု..။ လီးတန်ရှည်လျင်သာ သူမတိုက သားအိမ်အထိရောက်သွားသည်ဟု ထင်သဖြင့် စူးခနဲ စူးခနဲ ဖြစ်သွားကြရသည်မို့ ခံလို့ကောင်းကြသော်လည်း လီးကြီးသူထက် လီးတန်ရှည်သူကို မိန်းမများ စွဲလည်း စွဲလန်းသွားတတ်ကြသည်..။
ယခုလည်း ရာဇာ့ လီးတန်ကြီးက လုံးပတ်အနေတော်နှင့် အရှည်က လူနှင့် မလိုက်အောင် ဖြစ်နေသဖြင့် အမျိုးသမီး ရင်ထဲ စူးနင့်နေအောင်ပင် ခံနေရသည်..။ သူမ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် လီးအမျိုးမျိုးကို အနုနည်းရော အကြမ်းနည်းပါ မျိုးစုံ ခံဖူးထားသော်လည်း ရာဇာ့လီးလောက် ရှည်တာမျိုး မကြုံဖူးသေး…။ လီးမှာ ရှည်သည့်အပြင် မာတောင်နေသည်မှာလည်း ရာဘာတုတ်ချောင်းထက်ပင် သာလှပေသည်..။
လီးတန်ရှည်ရှည် မာမာတောင့်တောင့်ကြီးကို တစ်ခါမှ မိန်းမမလိုးဖူးသေးသော ရာဇာက ခပ်ကြပ်ကြပ်ရှိသေးသော စောက်ဖုတ်ပွပွကြီးအတွင်းသို့ အသကုန် ဆောင့်ထိုးကာ လိုးနေလေရာ အလိုးခံနေရသူ အမျိုးသမီးအတွက် ထူးခြားသော အရသာကို ရရှိခံစားနေရလေသည်..။
အမျိုးသမီးလို အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ရာဇာ့အဖို့ ပိုမိုကာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဖြစ်နေလေသည်..။ တောင့်တင်းမာဆတ်နေသော လီးတန်ရှည်ရှည်ကြီးကို အမျိုးသမီး၏ စောက်ဖုတ်အိအိကြီးအတွင်းသို့ အရင်းထိရောက်အောင် အားနှင့် စိုက်စိုက်ဆောင့်သွင်းကာ လိုးနေရသည်မှာ အလွန်အရသာ ရှိလှပေသည်..။
အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးကလည်း တစ်လုံးတစ်ခဲကြီးမို့ ရာဇာ့ရင်ခွင်အောက်တွင် အိခနဲ အိခနဲနှင့် ဖြစ်နေရသည်..။ အောက်မှာ ရှိသော မွှေ့ယာကလည်း စပရင်တပ်ထားသော မွေ့ယာမို့ တုန်ခနဲ တုန်ခနဲနှင့် အပေါ်သို့ ကန်ကန်ကြွတက်နေလေရာ အသားကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသော လီးတန်ကြီးအား စောက်ဖုတ်ကြီးက ညှပ်ဆုတ်ထားသလိုဖြစ်မှုကို အလွန်ပင် အရသာတွေ့နေရသည်..။
ရာဇာ့ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းမှ တရှူးရှူးနှင့် ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အတွင်းမှ တွန်းကန်ထွက်လာသော လေသံများနှင့် အတူ အင့်ခနဲ အင့်ခနဲနှင့် အမျိုးသမီး၏ ပါးစပ်မှလည်း ရာဇာဆောင့်ချလိုက်တိုင်း ဆောင့်ချက်နှင့် အပြိုင် ပေါ်ထွက်နေလေသည်.။
ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မိန်းမလိုးနေသည့် ရာဇာတစ်ယောက် စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ပဲ အားကုန် အသားကုန် ဆောင့်လိုးနေလေရာ တအီးအီးတအားအားနှင့် ဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးမှာ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ အံလေးကြိတ်ပြီး ခံနေရလေသည်..။ ရာဇာ၏ ယောက်ျားပီသပြီး မိန်းမကြိုက် ချောမောသည့် ရုပ်ရည်က အမျိုးသမီးကို မက်မောကျေနပ်စေသည်..။ ထို့ကြောင့် ရာဇာ့ အဆောင့်အညှောင့်များကို ဖင်ကြီးကော့ကော့ပေးပြီး ပြိုင်တူပင် စည်းချက်အကိုက် အလိုးခံနေလေသည်..။ လီးဝင်သည်နှင့် အနားမယူပဲ တရှိန်ထိုး အဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးနေခြင်းကြောင့် အချက်ငါးဆယ်ကျော်လောက်အရောက်တွင် ရာဇာ့တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်ခနဲ ဆတ်ဆတ်ခါသွားပြီး သူ့လီးတန်ကြီးထပ်မှ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်သွားလေတော့သည်..။
ဆောင့်လိုး၍ ကောင်းတုန်း လီးကြောများပူကာ သုတ်ရေများ အမြန်ပန်းထွက်သွားသည်ကို ရာဇာ တစ်ယောက် ထူးခြားကောင်းမွန်သော အရသာကို ရရှိခံစားလိုက်ရသော်လည်း အားမရသေးပဲ ဖြစ်နေရသည်..။ အခန်းတွင်းဝင်ပြီး အမျိုးသမီးကို ဖက်ကာ နှိုးဆွ၍ လိုးလိုက်ရသည်မှာ လေးငါးခြောက်မိနစ်လောက်သာ ကြာဦးမည်ဟု ရာဇာ ခန့်မှန်းမိသည်..။ ခဏလေးသာ လိုးရသေးသည်မို့ အမြန်ပြီးသွားရမှုကို ရာဇာ မကျေမနပ် ဖြစ်ရသည်..။
သို့သော်လည်း စောက်ဖုတ်၏ အတွေ့က အလွန်ထူးခြားလေရာ လူပျိုလေးဖြစ်သော ရာဇာ ဘယ်လိုမှ သုတ်ရေကို မထိန်းနိုင်ပဲ ခပ်မြန်မြန်ပင် ထွက်သွားရသည်ကို မသိသေးပါချေ…။
အရည်များ စိုရွှဲနေသော စောက်ဖုတ်ပွပွကြီး၏ အထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို အဆုံးအထိ ဖိထိုးသွင်းထားပြီး ရာဇာ မှိန်းနေလေသည်..။ အမျိုးသမီး၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ရာဇာ့ လီးတန်ကြီးကို ဖြစ်ညှစ်ပေးနေလေရာ ရာဇာတစ်ယောက် သဘောအကျကြီး ကျနေရပါသည်..။
ခဏမျှအနားယူပြီး ဇိမ်နှင့်မှိန်းနေရာမှ အတောင်မကျသေးသော လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်ဝသို့ ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ပြန်ဆောင့်လိုးပြန်သည်..။
“ အို….မောင်လေး…မလွန်ဘူးလား ကွာ….”
အရေများ စိုရွှဲနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးအတွင်းမှ ရာဇာ့လီးမှ ပန်းထွက်ထားသော သုတ်ရေများကြောင့် ပိုမို စိုရွှဲနေလေရာ ပြန်လည်ဆောင့်လိုးရာတွင် စွပ်စွပ်ဟူသော အသံလေးများပင် ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်..။
“ ဘာဖြစ်ရမှာလဲ…မင်းတစ်ချီပြီးသွားပြီ မဟုတ်လား..ဒါတောင် မနားတော့ပဲ ဆက်လိုးမှာလား..မောင်လေးရယ်….”
“ ကျနော် ..အားမရသေးဘူးဗျ…. ခဏလေး ပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်အားရမှာလဲ…ဗျာ…”
“ မင်း…တစ်ခါမှ ဒါမျိုး မကြုံဖူးသေး ဘူးလား..”
“ အင်း….ဒါကြောင့်လဲ မင်းလိုးတာ ကြမ်းလဲ ကြမ်း မြန်လဲမြန်တာကိုး… ဒါမျိုးဆိုတာ…စိတ်ထိန်းနိုင်သမျှ ထိန်းရတယ်…ကွ…”
“ သိဘူးလေဗျာ..ဒါပေမယ့် ရပါတယ်…ဗျာ…. အားတွေ ရှိနေတာပဲ ဥစ္စာ…”
ပြောရင်းဆိုရင်း တောင်နေဆဲပင်ရှိသေးသော လီးတန်ကြီးကို ရာဇာ ဆက်လက်ဆောင့်သွင်းရင်း အမျိုးသမီး၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိငုံစုပ်ယူနေလေသည်..။ သူ့လက်ကိုလည်း အမျိုးသမီး၏ နို့အုံလုံးလုံးအိအိကြီးနှစ်လုံးပေါ်သို့ အုပ်ကိုင်တင်လိုက်ကာ ဆုပ်ညှစ်နယ်ပေးရင်း ခပ်မှန်မှန် နှင့် ပြန်ဆက်လိုးနေသည်..။
အမျိုးသမီးမှာလည်း အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရာ အဆတ်မပြတ် မနားဘဲ အလိုးခံရဖူးသည်မို့ အလိုက်သင့်ပင် ဖင်ဆုံကြီးကို ပြန်ကော့ပေးလိုက် ၊ ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းကို မြှောက်ကြွပေးလိုက်နှင့် အပြိုင်လုပ်ပေးနေလေသည်..။
သုတ်ရေနှင့် စောက်ရေများ စိုရွှဲနေသော စောက်ဖုတ်ပွပွအိအိကြီးမှာ စွပ်ကနဲ စွပ်ကနဲ နှင့် လီးဝင်သံ ထွက်သံများ ၊ ဆီးခုံချင်း ရိုက်ခတ်မိသံများ ၊ ရာဇာ့ဂွေးဥကြီးက အမျိုးသမီး၏ ဖင်ကြားသို့ ပြေးရိုက်သံ တဖတ်ဖတ် ဟူသော အသံများနှင့် စည်းချက်မှန်စွာ အခန်းတွင်း၌ ထွက်ပေါ်နေလေသည်..။
ပြင်ပလောကကို ရာဇာ သတိမရတော့ပဲ လိုးကောင်းကောင်းနှင့် သာ ဆက်လိုးနေမိလေသည်..။ အနေအထားမပြောင်းတော့ပဲ အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ်မှသာ အားပါပါနှင့် ခပ်မှန်မှန်ပင် ဆောင့်လိုးလျက် ရှိသည်..။ လိုးရင်းကနေ အမျိုးသမီး၏ နှုတ်ခမ်းတွင်းသို့ လျှာကို ထိုးသွင်းကာ လှည့်ပတ်ကလိပေးလိုက် ၊ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း လက်နှင့်တစ်မျိုး ပါးစပ်နှင့် တစ်ဖုံ စို့လိုက် ထုပ်လိုက် ဆုပ်နယ်လိုက်နှင့် လုပ်ပေးရင် လိုးနေလေရာ လိုးရင်း လိုးရင်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် လူတစ်ကိုယ်လုံး ရင်တလှပ်လှပ် ဖြစ်လာရသည်..။
ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး ဆောင့်လိုက် အသာမော့ဆောင့်လိုက် ဖင်ရမ်းကာ စောက်ဖုတ်အတွင်း လီးတန်ကြီးကို မွှေနှောက်လှည့်ပတ် ချဲ့လိုး လိုးလိုက် စောက်ဖုတ်အုံပေါ်သို့ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ချော်ထိုးပေးလိုက် ၊ အမျိုးသမီး၏ လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်အဝပြန်တေ့ပေးချိန်တွင် အားထည့်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း အချက်၂၀ ခန့် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်နှင့် စိတ်ပါသမျှ ရာဇာလိုးပေးနေသည်မို့ ရာဇာ့အတွက် ဒုတိယအချီ ပြီးရန် နီးလာပေပြီ။
အမျိုးသမီးကလည်း ကျွမ်းကျင်စွာ အလိုးခံတတ်သူဖြစ်ရာ ရာဇာစွဲသွားအောင် အမျိုးမျိုး လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်..။ ရာဇာ့လီးတန်ကြီးအား စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြင့် ဆုပ်ဆွဲဖျစ်ညှစ်ပေးခြင်းကလည်း ရာဇာ့ကို စွဲသထက် စွဲစေသည်..။ ရာဇာနှင့် အပြိုင် ပြန်လည် ဖင်ကော့ပြီး ဆပ်ခနဲ ဆပ်ခနဲ ပင့်ပင့်တင်ပေးခြင်းကိုလည်း ရာဇာ သဘောကျမိသည်..။
ရာဇာ့နှုတ်ခမ်းများကိုလည်း အတင်းပင် စုပ်ပေးခြင်းကလည်း ရာဇာ့အတွက် စွဲလန်းစရာဖြစ်နေသည်..။ ရာဇာ့တစ်ကိုယ်လုံးကို အတင်းဖက်တွယ်ပြီး လက်ဖြင့် လျှောက်ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ရင်း ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်း ရမ္မက်လွှမ်းသံလေးများ ညည်းကာ အလိုးခံနေခြင်းကြောင့် ပိုမိုကြွကြွလသော ရမ္မက်စိတ်များ ရာဇာ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လာလေတော့သည်..။
ထို့ကြောင့်ပင် စလိုးစ ခပ်နှေးနှေး ခပ်မှန်မှန် ဇိမ်ဆွဲလိုးနေရာမှ မကြာမီ ဆောင့်ချက်များ မြန်လာရလေတော့သည်..။ ရာဇာ၏ အဆောင့်အညှောင့် များ မြန်လာသည်နှင့် အပြိုင် အမျိုးသမီးကလည်း ပြန်လည် ပင့်ကော့တင်ပေးနေလေရာ စိတ်ကိုလွှတ်ပြီး အတင်းဖိဖိဆောင့်လိုးလိုက်မိသော ရာဇာ၏ လီးတန်ရှည်ရှည်ကြီမျ ဒုတိယအချီ သုတ်ရေများ ပန်းထွက်သွားရပြန်လေသည်..။
ဟီးခနဲ အားကနဲ ဖြစ်သည်အထိ ရာဇာတစ်ယောက် ဖြစ်သွားရသည်..။ သုတ်ရေကုန်သွားသော လီးတန်ကြီးကို အမျိုးသမီး၏ စောက်ဖုတ်ကြီးအတွင်း၌ အဆုံးထိ သွင်းကာ ခြေပစ်လက်ပစ် နှင့် ပင် ရာဇာ ဇိမ်ယူနေမိသည်..။
အတော်လေးကြာအောင် မှိန်းပြီး ဇိမ်ယူနေသည်ကို အမျိုးသမီးကလည်း ဘာမှမပြောပဲ အောက်မှနေ ငြိမ်နေမိသည်..။ အပြင်မှ ကိုထဋ်နှင့် အောင်အောင်တို့ ပြောနေသော စကားသံနှင့် သောက်စားနေသော ဖန်ခွက်သံများကို သဲ့သဲ့ကြားရမှ ပြင်ပလောကကို ရာဇာ သတိပြန်ဝင်မိလေသည်..
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ လှိမ့်ဆင်းကာ အရေများ ပေပွစိုရွှဲနေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးနှင့် သုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ပုဆိုးနှင့် စွပ်ကျယ်အင်္ကျီကို ပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး အပြင်ထွက်လာချိန်တွင် အမျိုးသမီးမှာ သူမအဝတ်များ ပြန်ဝတ်ကာ ရေချိုးခန်းရှိရာသို့ ထွက်သွားသည်ကို ရာဇာတွေ့လိုက်ရသည်..။
“ ထွက်လာပြီလားကွ….မင်းဥစ္စာ မြန်လှချည်လား…ကြည့်စမ်း မိနစ်နှစ်ဆယ်သာသာပဲ ရှိသေးတယ်…”
ဟူသော ကိုထွဋ်က သူ့လက်မှ နာရီကို ကြည့်ကာ ပြောလိုက်သည်.။ ရာဇာကတော့ မိနစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း နှစ်ချီလိုးခဲ့သည်ကို ပြန်ပြောမနေတော့ပဲ ကိုထွဋ်တို့ ရှေ့ ကုလားထိုင်တွင် ခပ်လျော့လျော့ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်..။
“ ရာဇာ…လုပ်ကောလုပ်ခဲ့ရဲ့လား…ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ ထွက်လာတာလားကွ…ဟေ…”
“ ဟာဗျာ…ကိုထွဋ်ကလဲ…ဒီအတိုင်းတော့ ဘယ်ထိုင်ကြည့်နိုင်မလဲ ဗျ…”
“ ဒီလိုဆိုရင် မင်းလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့..ဘယ်နှယ့်လဲ…စွဲသွားပြီလား…”
“ ဟီးဟီး….အေးဗျာ…တော်တော် စွဲလန်းဖို့ ကောင်းတာပဲဗျ….နော်…”
ရာဇာတစ်ယောက် သူကြုံတွေ့ခဲ့သည့် ကာမအရသာကို စွဲလန်းသွားချေပြီ..။ သုတ်ထွက်ပြီးစကသာ ဗြုန်းခနဲ စိတ်ကုန်သလို ဖြစ်သွားသော်လည်း ယခု အပြင်ထွက်ပြီး ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ကာ ကိုထွဋ်နှင့် စကားပြောရင်း စောစောက အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်တုံးလုံး အနေအထားနှင့်အားရပါးရ လိုးခဲ့ရပုံကို တွေးမိသောအခါ သုတ်နှစ်ခါ ထွက်ထားသော လီးတန်ကြီးမှာ ပိုမိုတင်းလာရာမှ ခေါင်းထောင်ထချင်သလို ဖြစ်နေလေသည်..။
ရာဇာအပြီးတွင် အောင်အောင်ဝင်သွားသည်..။ အောင်အောင်တစ်ယောက် တစ်နာရီလောက် ကြာမှ ထွက်လာသည်..။ အမျိုးသမီးဆီ မသွားမီ အရက်သောက် အမြည်းစားသွားခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးအား အားရပါးရ လိုးပြီး ပြန်ထွက်လာချိန်တွင် အားရသွားသော ကာမအရသာနှင့် ထပ်သောက်ကာ မူးနေသော ဒဏ်ကြောင့် နောက်ထပ်မဝင်နိုင်တော့ပဲ အိမ်ရှေ့တွင် လှဲချရင်း အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်..။
အောင်အောင့်လိုပင် ကိုထွဋ်မှာလည်း တစ်နာရီ သာသာလောက်အကြာတွင် ပြန်ထွက်လာကာ သူတို့ ဝပြီဖြစ်၍ ရာဇာတစ်ယောက်တည်း ကြိုက်သလို လုပ်ဖို့ ပြောကာ မနက်မလင်းခင်သာ သူတို့အား နှိုးဖို့ ပြောပြီး အိပ်သွားလေတော့သည်..။
အမူးသမားနှစ်ယောက်အဖို့ တစ်နာရီစီ ဝင်ပြီး အမျိုးသမီးအား လိုးပြီးသွားသည်မို့ ဝလင်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်..။ အရင်ကလည်း ယခုလို ဈေးကြီးသည့် မိန်းမများအား ခေါ်ကာ တစ်ညလုံး ပျော်ပါးဘူးလေရာ သူတို့အတွက် သိပ်စွဲလန်းစရာ မဟုတ်တော့..။
ကိုထွဋ်ဆိုလျှင် မိန်းမ ပင်ရှိသည်..။ သို့သော် သူ့မိန်းမအပြင် နောက် ဘယ်မိန်းမရရ တစ်ချီနှစ်ချီကတော့ ရသလို လိုးတတ်လေသူမို့ သူပင် ရှာဖွေ ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ကိုထွဋ်နှင့် အောင်အောင်တို့ အိမ်ရှေ့တွင် ပိုးလိုးပက်လက်ဖြစ်ကာ အိပ်ပျော်နေကြချိန်တွင် ရာဇာတစ်ယောက် အမျိုးသမီးနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နှစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကြိုက် လိုးရလေတော့သည်..။
တစ်ချီပြီးသွားလျှင် ခဏ နားလိုက်ကြသည်..။ သို့ရာတွင် အတူယှဉ်အိပ်နေခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီ၏ အသားဆိုင်များက ရာဇာ့အား လီးတောင်စေလေရာ လီးတောင်လိုက် ထလိုးလိုက် ၊ ပြီးသွားလိုက် လီးပြန်တောင်လာလိုက် ထပ်ပြီးလိုးလိုက်နှင့် တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ ရာဇာလိုးလိုက်မိသည်..။
အမျိုးသမီးကလည်း သဘောကောင်းသူမို့ ရာဇာလုပ်သမျှ မညည်းမညူ ခံပေးသလို ရာဇာအား စွဲသွားအောင်ပင် ပညာကျွမ်းသူ ဖြစ်ရာ တစ်ချီလိုးတိုင်း ပုံစံတစ်မျိုးနှင့် အလိုးခံခဲ့သည်..။ ရာဇာကိုလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုး လိုးတတ်အောင် သင်ပေးလေသည်..။
နှစ်ဦးတည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့်မို့ တစ်ချီပြီး တစ်ချီ နားလိုက် လိုးလိုက်နှင့် စိတ်ထင်သလို ကြဲနေကြသည်..။ လူပျိုရိုင်းကလေး ရာဇာတစ်ယောက် ပထမဆုံး မိန်းမတစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်စွာ အားရပါးရ လိုးရသည်မို့ အမျိုးသမီးကို ပြန်ပို့ရန် ကိုထွဋ်တို့အား မနှိုးမီအထိ ကိုးချီ တိုင်အောင်ပင် လိုးလိုက်မိသည်..။ လိုးပြီးတိုင်း စောက်ဖုတ်ကြီးအတွင်း၌ သူ၏ရှည်လျားသော လီးတန်ကြီးကို စိမ်ကာ ဇိမ်ယူပြီး နှပ်ခဲ့သည်..။ မနက်မိုးလင်းချိန်၌ ရာဇာတစ်ကိုယ်လုံး နုံးချိနေလေတော့သည်..။
ရောဂါရှင်းရှင်း ပျောက်သွားပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် ထန်းရေမူး၍ ထန်းရေကို မသောက်တော့ပါဘူ ဖြတ်ပါပြီ…၊ ပြောသော ထန်းသမားတစ်ယောက် ၊ ထန်းရေအမူးအပြေတွင် ထန်းပင်ပေါ် မော့ကြည့်သကဲ့သို့ ရာဇာတစ်ယောက်မှာလည်း ရောဂါခံစားရစဉ်ကသာ ထိုခံစားရသော ဝေဒနာကြောင့် မကောင်းသော မိန်းမများကို စိတ်ကုန်သလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်..။
ရောဂါပျောက်သည်နှင့် တစ်ညလုံး ၉ ချီလိုးခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်သတိရကာ ထိုကဲ့သို့ ထပ်မံခံစားလိုစိတ်များ တဖွားဖွားနှင့် ပေါ်နေရလေသည်..။ အားအင်ပြည့်ဖြိုးကာ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူမို့ လိုးခဲ့ရသော ထိုညကို သတိရတိုင်း တောင်မတ်လာသော လီးကြီးမှာ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်နှင့် ဖြစ်နေလေရာ မိန်းမပျက်များကို ထပ်မံ မလိုးရဲအောင်ဖြစ်လာသဖြင့် ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ်ပဲ ဂွင်းတိုက်ကာ အာသာဖြေခဲ့ရသည်..။
မိန်းမရလျှင် ရမည့်မိန်းမအား အားရပါးရ လိုးရမည်ဖြစ်သော်လည်း မိန်းမ မရသေးမီ မိန်းမလိုးချင်လွန်းလှသော စိတ်က ရာဇာ့အား လွှမ်းမိုးလျက် ရှိနေသည်..။ ရာဇာ့စိတ်ထဲတွင် ရောဂါပိုးမရှိသော မိန်းမများနှင့် နှစ်ဦးသဘောတူ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အားရပါးရ လိုးလိုလှသည်..။
ထို့ကြောင့် ကြေးစား လုပ်စားသူမဟုတ်သည့် မိန်းမများကို ကြည့်ရင်း ရှာရင်း မရမီ ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ်သာ အာသာဖြေနေခဲ့ရသည်..။ ယခုထက်ထိတော့ ရာဇာ အလိုမပြည့်သေး..။
တစ်ခုလပ်လို မုဆိုးမလို သို့မဟုတ် အပျိုဘဝနှင့် ငွေကြေးလို၍ တစ်ဦးတည်းကိုသာ အလိုးခံနေရသူ မိန်းမများကို ရာဇာ ရှာဖွေနေမိသည်..။ အခွင့်မကြုံသေး၍ ရာဇာလိုချင်သော အခြေအနေများ မရရှိသေးပေ..။
နေ့ခင်ကပင် စိတ်များထကြွနေသဖြင့် ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ် ဂွင်းတိုက်ကာ အာသာဖြေခဲ့ရသော ရာဇာသည် လက်အတွင်းရှိ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်မှ သူ့စိတ်ကို ထကြွစေသော မင်းသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးပေါ်ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ကာ လီးတောင်နေရာ ဘေးနားမှ တယ်လီဖုံး မြည်လာသောအသံကြောင့် စာအုပ်ကိုချကာ စကားပြောခွက်ကို ကောက်ယူနားထောင်လိုက်သည်..။
တယ်လီဖုန်းကို အသာဘေးချပြီး အိမ်ရှေ့သို့ ရာဇာထွက်ခဲ့သည်..။ တယ်လီဖုန်းမှာ ဆေးခန်းအတွင်းရှိ သူနာပြုဆရာမလေး မနော်ဆီသို့ ဆက်ခြင်းမို့ ရာဇာက မနော်အား လှမ်းခေါ်လိုက်သည်..။
“ မနော်….ရေ… မနော်အတွက် ဖုန်းလာနေတယ်….”
ရာဇာ့ခေါ်သံကြောင့် ဆေးခန်းအတွင်း၌ ဇင်မာလွင်အား ဝိုင်းကူနေသော မနော်၏ ကိုယ်လေး ဆေးခန်းဝမှ ကိုယ်တစ်ပိုင်းထွက်လာကာ……
“ ဘယ်သူ့ဆီကလည်း… ကိုရာဇာ…”
“ အေမီ လို့ ပြောတာပဲ…မနော်…”
“ သြော်..ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့.. မနော် အခုပဲ လာခဲ့မယ်…”
မနော်အား ပြောပြီး ရာဇာလည်း စောစောက ထိုင်နေသော ကုလားထိုင်ဝယ် ပြန်ထိုင်ကာ ဘေးချထားသော စာအုပ်ကိုယူပြီး ဟိုလှန်ဒီလှန်နှင့် လှန်ကြည့်နေလိုက်သည်..။ ဟိုလှန်ဒီလှန် လှန်ရင်း စောစောက သူ့စိတ်ကို နှိုးဆွသလို ကိုယ်နေဟန်ရှိသော မင်းသမီးပုံကို ရောက်သည့်အခါ ဆက်လှန်မဖြစ်တော့ပဲ တပ်မက်သော ရမ္မက်စိတ်နှင့် ကြည့်နေမိသည်..။
မင်းသမီ ပီပီ ယောက်ျားများ၏ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော အလှရှိရာ ထိုအလှထဲမှ တင်ကိုလိမ်ထုတ်ပြီး ဖွံ့နေအောင် လုပ်ပြထားခြင်းနှင့် မို့မောက်စူကြွနေသော ရင်သားများကို ရှေ့သို့ကော့ပြီး ဖွင့်ပြသလို ဖြစ်နေခြင်းက ရာဇာ့စိတ်ကို နှိုးဆွသလို ဖြစ်နေရသည်..။ ထိုမင်းသမီး၏ လိုးချင်စဖွယ်ဟန်ဖြစ်နေသော ကိုယ်လုံးပေါ် ဓါတ်ပုံကို ကြည့်နေရင်း တယ်လီဖုန်းကို စကားလာပြောနေသော သူနာပြုဆရာမလေး မနော်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို နောက်ဘက်မှ မြင်နေရသည်မို့ စာအုပ်ကို ကိုင်ထားရင်းက ငေးကြည့်လိုက်မိလေတော့သည်..။
ယောက်ျားနှင့် ခွဲကာ မြို့သို့လာပြီး အလုပ်လုပ်နေသော မနော်၏ ကိုယ်လုံးကလေးမှာ ယခုလို လူလစ်တုန်း အားရပါးရနှင့် ကြည့်ခွင့်ရသောအခါမှ အလွန်ကြည့်ကောင်းသော အခြေအနေရှိကြောင်း ရာဇာသိလိုက်ရသည်..။
ယောက်ျားနှင့် တစ်နှစ်သာသာလောက် ကင်းကွာနေပြီး ကောင်းကောင်းစားသောက် နေရမှုကြောင့် အသားအရည်ဖြူဖွေး ဝင်းပကာ ပြည့်ဖြိုးလှပလျက်ရှိလေသည်..။ ၂၀ သာသာလေး ရှိသေးသော အသက်ကြောင့် နုစိုဝင်းပနေကာ အစွမ်းကုန် လှပပြည့်ဖြိုး နေချိန်ပင် ဖြစ်သည်..။
ဖြူဝင်းနေသော လည်ဂုတ်အောက်မှ ကျောပြင်ပြည့်ပြည့်လေးနှင့် ပခုံးသား တင်းတင်းလေးများက ဆုပ်ချေနမ်းရှိုက်ချင်စရာ သိမ်ကျစ်နေသော ခါးကလေးမှာ တစ်ပွေ့စာ ရှိဟန်မတူသော်လည်း ထိုခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်မှ တင်ပါးဆုံကားကားမို့မို့ကြီးကတော့ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ပင်မကဟု ထင်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြည့်ဖြိုးတင်းမောက်နေကြသည်..။
တင်ပါးဆုံကားကားအိအိ ဝိုင်းဝိုင်းပြည့်ပြည့်ကြီးအောက်မှ တက်ထရွန်ထမီကပ်နေသော ပေါင်တံများမှာ ဆင်နှာမောင်းသဖွယ် လုံးကျစ်ပြည့်တင်းနေဟန် တူသည်..။ ကရင်မလေး ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာရေလည်ကာ မြန်မာမများလိုပင် အရပ်အနေတော်နှင့် ကိုယ်လုံးက ထူးခြားစွာ ယောက်ျားများ အကြိုက် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလေရာ ဆေးခန်းလာသူ ယောက်ျားများမှာ ဒေါက်တာဇင်မာလွင်နှင့် သူနာပြုဆရာမလေး မနော်တို့ကို မြင်ရလျှင် ရောဂါတစ်ဝက် သက်သာ သွားရသည်ဟု ဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်..။
ဇင်မာလွင်ကလည်း ချောချောလှလှ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ယောက်ျားများ မက်စဖွယ် ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်..။ မနော်ကလည်း ထို့အတူပင်ဖြစ်ရာ ဆေးခန်းဖွင့်ပြီး မကြာမီ ဇင်မာလွင်၏ ဆေးခန်းမှာ လူ တော်တော် ကုသမှု များသွားလေသည်..။ ဆေးမကုလျှင်တောင်မှ ဒေါက်တာမနှင့် သူနာပြုဆရာမကို မြင်လိုစိတ်ဖြင့် ဆေးလာဝယ်သူ ယောက်ျားများ ရှိကြသည်..။
ဇင်မာလွင်မှာ ရာဇာနှင့် ပတ်သက်သလို ရှိခြင်းနှင့် မနော်မှာ အိမ်ထောင်ရှိသည်ဟူသော အခြေအနေကြောင့်သာ ယောက်ျားများ မစရဲကြခြင်းဖြစ်လေသည်..။
ယခု မနော်ကို နောက်မှ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့် အားရပါးရ ကြည့်နေမိသော ရာဇာတစ်ယောက် မနော်၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသော ကိုယ်လုံးကလေးကြောင့် မင်းသမီ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရင်း တောင်နေသော လီးမှာ အတောင်မကျပဲ ပိုမိုတင်းကာ ထောင်ထနေလေတော့သည်..။
မနော်က တစ်ဖက်မှ ဖုန်းပြောနေသူကို ရီကာမောကာနှင့် ကိုယ်လုံးကလေးကို ဟိုလှည့်ဒီရွှေ့နှင့် ပြန်ပြောနေဟန်က ရာဇာအား ကိုယ်ဟန်အမျိုးမျိုး ပြသလိုဖြစ်နေလေသည်..။ တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်နေသော မနော်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ကားတက်လာလိုက် ဟိုက်ကျသွားလိုက်နှင့် ဖြစ်နေလေသည်..။
ခါးကလေးလိမ်လိုက်သဖြင့် တင်ပါးဆုံကြီး ပိုမိုကားစွင့်ထွက်သွားခြင်း၊ ခေါင်းကလေး မော့ကာ ရင်ကိုချီလိုက်ခြင်းကြောင့် နို့အုံကြီးနှစ်လုံး ပိုမို ဖောင်းကြွတက်သွားခြင်း၊ ရီလိုက်သဖြင့် သိမ့်သိမ့် ခုန်သွားသော ကိုယ်လုံးကလေးမှာ ရာဇာ့မြင်ကွင်းတွင် လိုးချင်စိတ်များ နှိုးဆွနေသော ရုပ်တုကလေးတစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေလေသည်..။
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ပိုမိုတောင်မတ်လာသော လီးတန်ကြီးကြောင့် မနော်အား တပ်မက်စိတ်တို့ တဖြင်းဖြင်းနှင့် ရင်တွင်း၌ ပူလောင်လျက်ရှိရာ အိနြေ္ဒများပင် မဆောင်နိုင်တော့အောင် ဖြစ်လာရသည်..။ မနော်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို နောက်မှ ရပ်ကြည့်ရင်း အပေါ်အောက် စုန်ချီဆန်ချီ မျက်လုံးများကို ကစားကာ ပုဆိုးအောက်မှ ထောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို တစ်ချက်မျှ ငုံ့ကြည့်ကာ အိမ်ရှေ့သို့ လှမ်းအကဲခတ်လိုက်သည်..။
ဆေးခန်းအတွင်း၌ ရှိသော လူနာများကို ဇင်မာလွင်တစ်ဦးတည်း နိုင်နေဟန်ကြောင့် မနော်လည်း အေးအေးဆေးဆေး တယ်လီဖုန်းပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရာဇာသိသွားလေသည်..။
ထို့ကြောင့်ပင် ပေါင်ကြားမှ အတင်းပင် ရုန်းကန်ထောင်ထနေသော လီးတန်ကြီး ဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေမှုကို ဆန္ဒဖြည့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်.။ ဖုန်းပြောနေသော မနော်ရှိရာသို့ ရာဇာ လျှောက်သွားကာ မနော် နောက်နား ကပ်ရပ်လိုက်သည်.။ သူ့အရပ်ထက် လေးလက်မခန့်နိမ့်သော မနော်၏ ပြည့်ပြည့်ဝင်းဝင်း ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲဖက်လိုလှသော်လည်း မနော်တစ်ယောက် စကားပြော မပြတ်သေး၍ ဝင်းဝင်းပပနှင့် ပြောင်ရှင်းနေသော လည်ဂုတ်သားလေးကို သာ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိသည်..။
“ အေးအေး…ဒါပဲ..မဟုတ်လား…၊ အေမီ…အင်း…အင်း..ဒါပဲနော်…”
ဟူ၍ ဖုန်းချလိုက်သည်နှင့် မနော်၏ ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးအား သူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ ရာဇာ ဆွဲသွင်းလိုက်တော့သည်..။ ရာဇာ၏ တောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးက မနော်၏ ဖင်ဆုံကြီးနှစ်မွှာကြားသို့ သွားထောက်နေချိန်တွင် လည်ဂုတ်သားဖွေးဖွေးဝါဝါလေးကို ရာဇာတစ်ယောက် တရှိုက်မက်မက်နှင့် ငုံ့နမ်းလိုက်သည်..။
“ အို…ရာဇာ…မနော်ကို ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ….”
မနော်ထံမှ အသံလေးထွက်လာသည်..။ ရာဇာ ဘာမှ ပြန်ပြောမနေပဲ မနော်၏ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ဘက်သို့ အသာဆွဲလှည့်ကာ နီရဲရွှန်းစိုနေသော နှုတ်ခမ်းသားကလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိငုံကာ အတင်း စုပ်ယူပစ်လိုက်သည်..။ နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ ဖိစုပ်ယူရင်း တင်းမာဖောင်းကြနေသော တင်ပါးဆုံပြည့်ပြည့်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်နေလေရာ မနော်တစ်ယောက် ခြေဖျားလေးများပင် ကြွတက်သွားရရှာသည်..။
မနော် စကားပြောရန် အားထုတ်မှု မအောင်မြင်၊ ရာဇာက ဆက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ဖိစုပ်နမ်းပြန်သည်..။ လက်ကလည်း မနော်တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အသားဆိုင်များကို လက်လှမ်းမီသလောက် လိုက်လံ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်..။ ဆူဖြိုးအိစက်နေသော မနော်၏ အသားဆိုင်များမှာ ရာဇာ၏ လက်တွင်းဝယ် နံပြားရိုက်ရန် လုပ်ထားသော ဂျုံများကို နယ်နေသကဲ့သို့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်နှင့် အဆုပ်အနယ် ခံနေရတော့သည်..။
နှုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်ပေမယ့် မနော် ပါးစပ်ထဲသို့ ရာဇာက သူ၏ လျှာကို ထိုးသွင်းကာ လျှာချင်း လှည့်ပတ်ပွတ်ဆွဲ ကလိပေးလေရာ သူနာပြု ဆရာမလေး မနော်တစ်ယောက် ဘာမှ သတိမရနိုင်တော့ပဲ ရာဇာကဲ့သို့ပင် ရမ္မက်သွေးများ ဆူဝေကြွတက်လာရသည်..။
ရာဇာ့ကိုယ်လုံးကြီးအား အတင်းပြန်ဖက်ထားမိရင်း ပေါင်ကြားသို့ ထောက်မိထိုးမိနေသော ရာဇာ့ လီးတန်ကြီးကြောင့် ယောက်ျားနှင့် နေဖူးသော မနော်အတွက် ငြိမ်သက်နေသော ၇မ္မက်မီးပွားတို့က တဖြစ်ဖြစ်နှင့် တောက်လောင်စပြုလာသည်..။
မနော် တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါး ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးရင်း နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်လိုက်၊ လျှာချင်း ပွတ်သပ်ကလိလိုက် လုပ်နေသော ရာဇာတစ်ယောက် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သဖြင့် မနော်၏ ကိုယ်လုံးလေးအား သိုင်းဖက်ပွေ့ယူကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ သွားရန်ပြင်လိုက်သည်.။
“ မနော်…ရေ….မနော်….. မပြီးသေးဘူးလား…”
ဟူသော ဆေးခန်းမှ ဇင်မာလွင့် အသံကြောင့် နှစ်ယောက်သား တွန့်ခနဲ တုန်သွားကြလေသည်..။ ရာဇာ့လက်ထဲ၌ အလိုက်သင့်ကလေး ပွေ့ချီခံထားရသော မနော်လည်း ဇင်မာလွင့်အသံကြားရလျင် ရာဇာ့လက်တွင်းမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ အသာ ပြန်ဆင်းလိုက်သည်.။
“ မနော်ရယ်…ရာဇာတော့ မနော်ကို သိပ်ချစ်ချင်နေပြီ…မသွားပါနဲ့လား…ဟင်…”
မနော်၏ လက်မောင်းအိုးကလေးနှစ်ဖက်ကို အသာဆုပ်ကိုင်ရင်း ရာဇာက ပြောလိုက်သည်..။
“ အို…ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ…ကိုရာဇာရဲ့…တော်ကြာ မမလွင်သိသွားမှ ခက်နေလိမ့်မယ်…လွှတ်ပါတော့နော်….နောက်မှ….နောက်မှ….သိလား…”
မနော်မှာလည်း တက်ကြွလာသော ရမ္မက်ဆန္ဒကို အလိုပြည့်အောင် ခံစားလိုလှသော်လည်း အခြေအနေမပေးမှုကြောင့် ဆင်ခြင်လိုက်ပြီး ရာဇာကို တောင်းပန်လိုက်သည်..။
“ ဒီလိုဆိုရင်…ဆေးခန်းပိတ်ပြီး မနော် မပြန်နဲ့တော့…နော်…ကိုယ် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး…”
ပြောရင်း ခါးကိုကော့ကော့ ပေးနေသဖြင့် ရာဇာ့ လီးတန်ကြီးက မနော်ပေါင်ကြားကို ထိုးညှောင့်ပေးသလို ဖြစ်နေရာ မနော်မှာ အနေခက်နေသည်..။
“ ဖြစ်ပါ့မလား…ကိုရာဇာရယ်…မနော် ကြောက်တယ်…”
မနော်မှာ အလိုးခံချင်လှသော်လည်း ရာဇာအား ငြင်းသလိုလိုနှင့် ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေကို လမ်းခင်းပေးရင်း မေးလိုက်သည်..။
“ ဖြစ်ပါတယ်…မနော်ရယ်…မမလွင်ပြန်ရင် ရာဇာ လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်…၊ အပြန်ကျတော့ မနော် ပြန်လိုက်ခဲ့ပေါ့…ဟုတ်လား…နော်…နော်…”
ညတိုင်း ဇင်မာလွင်နှင့် မနော်အား ရာဇာ လိုက်ပို့ပေးနေကျ ဖြစ်သည်..။ တစ်ခါ တစ်ခါ မနော်အား သူမစီးရမည့် ကားဂိတ်သို့ ပို့ပေးပြီး ဇင်မာလွင်ကို နောက်မှ အိမ်သို့ ပို့ပေးရသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း ဇင်မာလွင်ကို အရင်ပို့ပြီးကာမှ မနော်အား ကားဂိတ်သို့ ပို့ပေးဖြစ်သည်..။
“ မနော်ရေ…လာဟေ့…ရာဇာရေ မနော် ရှိတယ်မို့လား..”
တယ်လီဖုန်းပြောပြီး နောက်ဖေးသွားသည်ထင်ပြီး ဇင်မာလွင်က အိမ်ထဲ လှမ်းမေးလိုက်သည်..။ ဆေးခန်းနှင့် အိမ်မှာ ပေအစိတ်လောက်ဝေးသည်မို့ အသံကြားနေရသော်လည်း တရုပ်ကပ်မှန်ဘောင်များက အတွင်းမှ လူကို ကွယ်ထားကြသည်..။
“ မနော် သွားတော့မယ်.. ကိုရာဇာရယ်.. လွှတ်ပါတော့..”
မနော်က ရာဇာ့ရင်ခွင်အတွင်းမှ ရုန်းထွက်နေသဖြင့် ပိုမို မချင့်မရဲဖြစ်လာလေရာ ရာဇာတစ်ယောက် မနော် ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်တင်းတင်းတိုးဖက်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စုပ်ယူလိုက်သည်။ အသက်အောင့်ကာ တစ်ရှိန်ထိုး စုပ်ယူပြီး လွှတ်ပေးလိုက်မှ ကြွတက်နေသော မနော်၏ကိုယ်လုံးလေး ပြန်ကျသွားကာ လှည့်ထွက်သွားလေသည်။
အိမ်ရှေ့တံခါးကို ဖွင့်အထွက် မနော်က ရာဇာ့ဆီ တစ်ချက်လှမ်းအကြည့်တွင် ပုဆိုးအတွင်းမှ ထိုးထွက်နေသော လိင်တံအချောင်းကြီးကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် ဗြုန်းခနဲ မျက်နှာလွှဲကာ မနော်ထွက်သွားလေသည်။
ရာဇာကတော့ မနော်၏ မွှေးကြိုင်လှသော ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေး၏ တစ်တုံးတစ်ခဲနှင့် ဖက်၍ကောင်းလှသော အခြေအနေကို ခဏလောက် လက်လွှတ်လိုက်ရသည်ကိုပင် မစောင့်နိုင်တော့ဟန်ဖြင့် ဟင်း…ခနဲ မကျေမနပ်နှင့် သက်ပြင်းရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်လေတော့သည်။
ကိုယ်တုံးလုံးလေးဖြစ်နေသဖြင့် အချိုးအစားကျန လှပသော မနော်၏ ကိုယ်လုံးကလေးအား ရာဇာတစ်ယောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းနှင့် ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ လင်ရှိသူဖြစ်သော်လည်း လင်နှင့်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက် ခွဲနေရသူမို့ အပျိုတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် မနော်၏အသားဆိုင်များမှာ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိလှသည်။
ထိုမာတင်းကျစ်လျစ်လှသော မနော်၏ ကိုယ်လုံးလေးအား ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်နယ် ကိုင်တွယ်ပေးနေမှုက အလိုးခံဘူးသည့် အတွေ့အကြုံ ရှိသော မနော်လို အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်ကျော်လောက် မျိုသိပ်နေခဲ့ရသည့် ကာမအရသာကို ပြန်လည်ခံစားရတော့မည်မို့ မနော်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ တလူးလူးတလွန့်လွန့် ဖြစ်နေရရှာသည်။
ဇင်မာလွင်အား အရင်ပို့ပေးခဲ့ပြီး မနော်အား သူငယ်ချင်းဟု အကြောင်းပြကာ ရာဇာ ခေါ်လာခဲ့သည်။ ရောက်လျှင် စောစောက ဆန့်တငံ့ငံ့ဖြစ်ခဲ့ရသော အရသာယူပွဲကို အမြန်ဆုံးပင် စလိုက်ကြသည်။